Cherry Blast bụ otu nke kasị mma nweghị ego ohere mpere dabeere na isiokwu nke ọhụrụ na yi mkpụrụ osisi. Nke a bụ egwuregwu a zuru okè ncheta bụ na ị ga na-aṅụ mkpụrụ osisi na-anọ mma. The egwuregwu atụmatụ osisi na-edozi mkpụrụ osisi na anya nnọọ mma na-esi anwụde. Nke a ise-esi anwụde oghere egwuregwu nwere orú nzọ-ụzọ na-enye dị iche iche na-emeri ihe n'ịgwa. The-esi anwụde na-setịpụrụ na backdrop nke a teal nkịtị wallpaper na enhances mma nke na akara. E nwere a ngwa ngwa upbeat music ke ndabere na-ị na ume n'ụzọ nile. Ịkụ nzọ ebe a na-amalite na ihe ego nke £ 0,20 na Max dị £ 40 kwa uzo. Ya mere a zuru okè mmefu ego oghere niile ụdị egwuregwu.
Banyere Mmepụta nke Cherry Blast
Nke a yi nweghị ego ohere mpere game e mepụtara site Iron Dog (NYX). A ihe ohere mpere development ụlọ ọrụ na nkà dị iche iche egwu egwuregwu teknụzụ na-eme ka o kwe ha ka ha na-akwado iche iche mobile ngwaọrụ. N'ihi ya, i nwere ike igwu ha egwuregwu mgbe na-aga.
The nnọchianya nke a nweghị ego ohere mpere game bụ strawberries, kiwis, plums, lemons, wọtamelọn, red 7s, ọlaedo hey na ejima ọlaedo cherị. The top na-akwụ ụgwọ na akara bụ ọlaedo cherị na-akwụ 1000x gị eto. Iji nweta na mkpa ka ị na adaa ise nke ya ụdị gafee a payline. The ọpụrụiche nke egwuregwu a bụ bonus atụmatụ n'ihi na e nwere na asatọ nke ha. An Apple si PC game Pacman, acha uhie uhie na green eze ọta, red kpakpando, acha uhie uhie na green eze okpueze, ejima cherry bọmbụ na a otu cherry bọmbụ bụ bonuses.
Cherry Bomb Daashi: The nnọchianya nke cherry bọmbụ ike adaa naanị center nke etiti ukwu. Mgbe ọ na-egosi na ị nwere ike inwe ihe ọ bụla n'ime ihe anọ ahụ atụmatụ. 3 ikposa akara, ise wilds, free spins ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ bonus nke egwuregwu. The ejima cherry bọmbụ bụ ihe nnọchianya na-egosi na n'oge free spins na enọ ị na yiri atụmatụ.
Dash daashi: Mgbe ị na-ala na-apple akara ugboro atọ n'oge a atụ ogho a nweghị ego ohere mpere game, ị na-e ka a bonus larịị. Nke a bụ yiri Pacman game na mkpa ka ị họrọ isi ike larịị si 1 to 5. The elu isi ike larịị nwere mma ụgwọ ọrụ karịa ala ndị.
Anụ ọhịa na Gbasaanụ: Red na green okpueze na-anọchi anya ọhịa na ikposa akara karị. Wild ekpuchi maka niile akara ma e wezụga bonuses. Ikposa na-enye gị mkpụrụ ego mmeri nke 80x n'elu atọ akara ọdịda.
Na a ìgwè bonus atụmatụ na yi ndịna, this nweghị ego ohere mpere game bụ ihe kasị mma na-akwụghachi ụgwọ oghere. Na ihe RTP of 94%, i nwere ike imeri dị iche iche elu eto ụgwọ ọrụ.